Saturday September 26, 2020 - 08:46:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mzee jomo kenyatta wuxu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee kenya. Wuxu dalka hogaaminayey 1963 illaa 1978-kii.
Kenyatta oo ka soo jeeda qoomiyadda kikuuya ayaa ahaa nin waxbartey balse ay ku weyn tahay qabyaaladdu, ka hor intii aanu madaxweynaha noqon wuxuu qorey dhawr buug oo meelo kala duwan laga akhristey.
Ninkan oo caan ku ahaa u xaglinta beeshiisa ayaa aamminsanaa in kenya ay iska leedahay beeshiisu. Buugaagta uu qorey kuwa ugu caansan waxa kamid ahaa buugga la yidhaa "Facing Mount Kenya”. Dadka buuggaas akhriyey waxa ay ka dhadhansadeen sida uu ugu talax tagey qabyaaladda isla markaana u aamminsanaa in kikuuyadu kenya leedahay qoomiyadaha kalena ay marti ku yihiin. Madaxweyne kenyatta 15 wasaaradood oo uu magacaabey 8 kamid ah isla markaana ahaa kuwii ugu cuslaa waxa uu siiyey beeshiisa.
Kenyatta magaca hooyadii iyo aabihii u bixiyeen ma ahayn kan hadda loo yaqaan sida uu ku sheegay buuggiisa "Facing Mount Kenya” ama waajihidda buurta kiiniya, magacii loogu wanqaley waxa uu ahaa Kamau-Wa-Ngegi. Kolkii uu isku magacaabey magaca Kenyatta waxa uu uga dan lahaa in qoomiyaddiisu u qaadato rasuul looga soo direy buurta Mount Kenya, buurtaas oo ahayd mid ay caabudi jireen isla markaana aamminsanaayeen in ilaahoodu joogo.
Haddaba markii loo magacaabey madaxweynaha kenya waxa uu sameeyay tallaabooyin culus oo uu siyaasadda iyo dhaqaalahaba ugu gacan gelinayo tolkii, waxa uu raadsadey wiilashii ay dhaleen cuqaashii Kikuuyada ee caanka ahaa sida: Chief Njojo, Chief Waiyiaki, Chief Nderi iyo kuwo kale. Sidoo kale waxa uu labadii bangi ee dawladdu lahayd u kala magacaabey Michuki iyo Githinguri oo beeshiisa ahaa. Labadaas ninna waxa ay deyn siin jireen Kikuuyada oo keli ah, si qabiilkoodudadkacaddaanka uga iibsadaan guryaha ugu qurxoon uguna qaalisan kenya.
Waxa kale oo ay dhul fidsi ku sameeyeen qoomiyadihii kale ee la jaarka ahaa sida Kelejiinta oo ay dhulkoodii wax badan oo kamid ah dageen laakiin nasiib wanaag doorashadii 2007 ayaa keentay in ay kikuuyo badani ka soo qaxaan dhulkii kelejiinta ay hore uga qaadeen kaddib markii waddanka qalalaase ka dhacey. Waxa kale oo kenyatta dejiyey dadkiisa xeebta Mombasa oo ay lahaayeen qabaa’il yaryar oo aan tamar badan lahayni, heer ay gaadho iney aas aasaan Jabhad qarsoodi ah oo magaceedu yahay "Mombasa Republican Army”.
Haddaba beryahan dambe waxa tiifiiyada laga arkaa niman waaweyn oo sheeganaya siyaasiyiin soomaaliyeed isla markaana la soo taagan waxaanu nahay keenyaan, meesha ay ku faanayaan kuwii wada lahaa baa sii kala leh!.
Waxa sidoo kale xusid markii Soomaalidu u doodeysay madaxbannaanida dhulka NFD ayaa shir loogu qabtey magaalada caruusha 1967-kii labadii Reysal wasaare ee Kiiniya iyo Soomaaliya oo kala ahaa Kenyatta iyo Ina Cigaal. Wadahadallada waxa dhexdhexaadinayey madaxweynihii Tansaaniya Niyareere.
Markii kursiga wadahadallada loo fadhiistey ayuu niyareere yidhi sow isma haysataan bal haddaba legdema kiinna xoogweyn aan arkee, xoogaha baaney is jiid jiiteen sida carruurtii. Akhristow malaga yaabaa in wadahadallada badda sidaas oo kale la isku diro sida ciyaalka.
Ugu dambeyn waxa iska riyo meehannow marka wixii lagaa qaadey aad istiraa wada hadal halaguugu soo celiyo. Dadka badda Soomaaliyeed ka hadlaya waxa wanaagsan horta in ay arkaan dhulka soomaaliyeed ee hore iyo haddaba kenya xoogga ugu haysato. Wixii xoog lagaaga qaatey xoog uun baa lagu soo dhacsadaa.
Buugga Raad raac taariikh Soomaaliyeed oo uu qorey Ambassador Cawil.
Buugga Dharaaro Xusuustood oo uu qorey Prof Gees.
Qalinkii iyo qaabayntii Wadaadyare Xaashi
Saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka Kenya oo weerar lakulmay iyo sarkaal Muqdisho lagu dilay.